အဟောင်းပြီးတော့ အသစ် ....
: at 12/31/2011 11:59:00 AM
အချိန်တွေ ရာသီတွေ တရွေ့ ရွေ့ ပြောင်းလဲ လာနေလိုက်ကြတာ ၂၀၁၁ ခုနှစ်လည်း တစတစဟောင်း၍လာလေပြီ ။ ဖြစ် ပျက် သံသရာမှာ လည်နေကြရတဲ့ သဘော အရ အချိန်တန်တော့လည်း သူ့ ခမျာ နှစ်သစ် ဖြစ်လို့ မှ ဘယ်လောက်မှ မကြာ .. ၃၆၅ ရက် (သို့မဟုတ်) ၁၂ လ ဟူသော ကာလ အကြာမှာ အနိစ္စသဘောနဲ့ ဟောင်းနွမ်းကာလ အဖြစ် သတ်မှတ်ခံရပါတော့မယ် ။Sweet December လို့ တင်စားခေါ်ဝေါ်လေ့ရှိကြတဲ့ ဒီဇင်ဘာရဲ့ နောက်ဆုံးတရက် ကို ကျော်ဖြတ် အပြီး၊ အတိတ် ၊ ပစ္စုပ္ပန် ၊ အနာဂါတ် ၊ ပါးပါးလျလျလေးများသာ ခြားနားနေကြတဲ့ အချိန်တိုလေးအတွင်းမှာ အရာရာဟာ မြဲနေနိုင်စွမ်းမှ မရှိတာမို့နေရစ်ခဲ့ရတော့မဲ့ ၂၀၁၁ အတွက် ..အတိတ်ကို ပြန်ဖေါ်ပြီး စဉ်းစားဆင်ခြင်မိတဲ့ အရာများထဲမှ မှတ်မိသလောက် ချရေးကြည့်ချင်လာတဲ့ အတွက် ဒီစာတပုဒ် ဖြစ်လာရပါတယ် .. ။
၂၀၁၀ ခုနှစ် ကုန်ဆုံးတော့ ၂၀၁၁ နှစ်သစ်ကိုလည်း လူအများ ပျော်ပျော်ပါးပါး နဲ့ ကြိုဆိုခဲ့ကြ ၊ နှစ်သစ်ဆုမွန်များတောင်းခဲ့ကြပါတယ် ။အများစုက နှစ်သစ်မှာ မျှော်လင့်ချက်သစ်များစွာ နဲ့ ကျန်းမာ ချမ်းသာ လန်းဖြာကြစေကြောင်း ၊ ကမ္ဘာတဝှမ်း အေးချမ်းသာယာ ဘေးဘယာကင်းကွာကြစေဖို့ဒေသအလိုက် ရိုးရာအလိုက် ဆုတောင်းပွဲ နှစ်သစ်ကြိုဆိုပွဲတွေ ကျင်းပလေ့ရှိကြတယ် ။ဆုဆိုတာလည်း တောင်းတိုင်းပြည့်တတ်တဲ့ အမျိုးမှ မဟုတ်လေတော့ ၊ အကောင်းနဲ့အဆိုး ဒွန်တွဲနေတတ်တဲ့ သဘောသဘာဝလည်း ရှိနေတတ်တော့ နှစ်စဉ် နှစ်တိုင်း မှာ မြေငလျှင် ၊ ရေဘေး ၊ လေဘေး၊ မီးဘေး၊ အစရှိတဲ့ ကြိုတင်မှန်းဆလို့မရတဲ့ သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ် များစွာ မကောင်းတဲ့ ဘေးဆိုး ကပ်ဆိုးအမျိုးအမျိုး လည်း ကြုံတွေ့ ရလေ့ရှိတယ်။
၂၀၁၁ - ဒီတနှစ်အတွင်း ဖြစ်ခဲ့တဲ့ သဘာဝဘေးဆိုးတွေထဲမှာ မြေငလျှင်၊လေပြင်းမုန်တိုင်း ၊ဆူနာမီရေလှိုင်း၊ ရေကြီး ၊ မြေပြို ၊အစရှိသဖြင့် အမျိုးပေါင်းစုံလင်စွာ ရှိခဲ့တယ် ။ အဲဒီကပ်ဘေး တွေထဲမှာ ကြောက်မက်ဘွယ်ရာ သေဆုံးပျက်စီးခဲ့ရတဲ့ အချို့ ကပ်ဘေးဆိုးကြီးတွေကို ပြန်ပြောင်း လေ့လာလိုက်မယ် ဆိုရင် - ၂၀၁၁ မတ်လ ၁၁ ရက်နေ့ က ဂျပန်နိုင်ငံ ဖူကူရှီးမားမြို့ မှာ လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ ပြင်းအား ၉ဒသမ၁ ရှိ ငလျှင် နဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ရိုက်ခတ်လိုက်တဲ့ ဆူနာမီလှိုင်းလုံးကြီးတွေကြောင့် လူပေါင်း ၁၅၀၀၀ ခန့် မျှ အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီး ပျောက်ဆုံး ပျက်စီးမှု ပမာဏ ၊သန်းပေါင်းများစွာ အပြင် ဓါတ်ရောင်ခြည်ဘေးသင့်တဲ့ အန္တရာယ် ရဲ့ နောက်ဆက်တွဲပြသနာများစွာကို နှစ်ပေါင်းအတန်ကြာခံစားကြရမှာ ဖြေရှင်းကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တူရကီနိုင်ငံမှာ အောက်တိုဘာလ ၃ ပါတ်အတွင်း ၂ကြိမ် လှုပ်သွားတဲ့ ၊ ၇.၂ ပြင်းအားရှိ ငလျှင်ကြောင့်လည်း လူ ရာပေါင်းများစွာ သေဆုံးခဲ့ရတယ် ။
ဒါ့အပြင် ၂၁၀၀ ဇန္နဝါရီလ ၁၁ ရက်နေ့ က ဘရာဇီးနိုင်ငံ Rio-de-Janeiru မှာ တိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့ လေပြင်းမုန်တိုင်း နဲ့ မြေပြိုမှု များကြောင့် လူပေါင်း ၁၀၀၀ ကျော် သေဆုံးခဲ့ရပြီး ပျက်စီးမှု တွေ အများအပြားရှိခဲ့တယ်။
ထို အတူပဲ သြစတြေးလျနိုင်ငဲ ကွင်းစလန်း ပြည်နယ် နဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံ များမှာလည်း ရေလွှမ်းမိုးမှု များ အကြီးအကျယ် ဖြစ်ခဲ့ပြီး အသက် အိုးအိမ် စည်းစိမ် များစွာ ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်။ ဒီ သတင်းတွေ အတွက် ကြားရသူအပေါင်းမှာ လည်း စိတ်မကောင်းခြင်းများစွာ ဖြစ်ခဲ့ရတယ် ။ ဒါတွေကတော့ သဘာဝ တရားကြီး ဖေါက်လွဲဖေါက်ပြန်ဖြစ်လို့မမျှော်လင့်ထားတဲ့ ဆိုးကျိုးတွေပေါ့။
ကမ္ဘာကျော် ပန်းသီးကုမ္ပဏီရဲ့ ဥက္ကဌ Steve Jobs လည်း နှစ်အနည်းငယ်ကြာ ကင်ဆာဝေဒနာခံစားရပြီး နောက် အောက်တိုဘာလ ၅ ရက် နေ့ မှာ သူချစ်တဲ့ အလုပ် နဲ့ ကုမ္ပဏီကို ရာသက်ပန်ခွဲခွာသွားခဲ့တယ် ။ ဒီင်္အတွက်လည်း တကမ္ဘာလုံးမှာ ရှိတဲ့ သူ့ ကို လေးစား ချစ်ခင် အားကျ သူ သန်းပေါင်းများစွာ မှာ ဝမ်းနည်းကြေကွဲ ခဲ့ရတယ် ။ အင်တာနက် နဲ့ ကမ္ဘာ့သတင်းတွေ အရ ၊ ပန်းသီးတလုံးရဲ့ဖမ်းယူ ဆွဲဆောင်မှု မှာ အံ့မခန်းလောက်အောင်ကိုပဲကြီးမားလှကြောင်း မျက်ဝါးထင်ထင် သိလိုက်ရတယ် ။ ရှားရှားပါးပါးဖြစ်တဲ့ လူတော် လူကောင်း တယောက် ဆုံးရှုံးရခြင်း အတွက် ဖြေမဆည်နိုင်ကြတဲ့ အဖြစ်တခုပါ ။
ဒါပေမဲ့ ဒီ ၂၀၁၁ မှာပဲ နာမည်ကြီး တချို့ လူတွေရဲ့ကျရှူံး ၊ သေဆုံး တဲ့ သတင်းများ ထွက်ပေါ်လာတဲ့အခါ ကမ္ဘာ့ လူသား အတော်များများ က ဝမ်းမြောက် ပျော်ရွှင်ခဲ့ကြတယ် ။ ဥပမာ တချို့ပြန် ကောက်နှုတ်ပြရမယ်ဆိုရင် အီဂျစ်နိုင်ငံကို နှစ်ပေါင်း ၃၀ ကျော် ၊ တဦးထဲ အာဏာရှင်စနစ်နဲ့ အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ သမ္မတ မူဘာရက် ( Hosni Mubarak) ကို ၊ အံ့သြဘွယ်ကောင်းလောက်တဲ့ အင်တာနက် တော်လှန်ရေးနဲ့ အစပြု တော်လှန်ခဲ့ကြတာမှာ ၂၀၁၁ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁၁ ရက်နေ့မှာ အောင်မြင်စွာ ဖြုတ်ချပြစ်နိုင်ခဲ့ကြတယ် ။ တူနီးရှား တော်လှန်ရေးကို အတုယူပြီး အောင်မြင်မှု ရခဲ့လိုက်တယ်။
နောက်တယောက် အကြမ်းဖက်သမားကြီးကတော့ အယ်ကိုင်ဒါးခေါင်းဆောင် အိုစမာဘင်လာဒင်(Osama bin Laden) ၊ အာဖဂန်နီစတန် နိုင်ငံ ဆိုတာ သူ့ ကြောင့် နာမည်ကြီးခဲ့တာ ၊ ကောင်းသတင်းတော့ မဟုတ် ၊ အကြမ်းဖက် ဖျက်ဆီးရေးလုပ်ငန်းပေါင်းများစွာကို နှစ်ပေါင်းများစွာ ဦးဆောင် ညွှန်ကြား လုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ သူ့ လုပ်ရပ်တွေထဲမှာ 911 ဆိုတဲ့ ၂၀၀၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၁၁ ရက် ဖေါက်ခွဲဖျက်ဆီးမှုများကြောင့် ကမ္ဘာ့ လူသား များစွာ ၊ အထူးသဖြင့် အမေရိကန်ပြည်သူတွေရဲ့အကြမ်းဖက် ရန်သူ တော်ကြီး ဖြစ်ခဲ့ရသူတယောက် ၊ သူ့ ရဲ့အရှောင်ကောင်း အပုန်းကောင်းမှုကြောင့် ၁၀ နှစ်တာမျှ မြေလှန်ရှာခဲ့ရတဲ့ ဘင်လာဒင်တယောက်လည်း နောက်ဆုံးမတော့ ဇာတ်သိမ်းခြင်းမလှပစွာနဲ့ ဇာတ်သိမ်းခဲ့ရတယ် ။ အဲဒီ နေ့၂၀၁၁ ခုနှစ် မေလ ၂ ရက်နေ့ မှာတော့ သူ့ လက်ချက်နဲ့ အသက်ဆုံးခဲ့ကြရသူတွေရဲ့ ကျန်ရစ်သူ ဆွေမျိုး မိတ်သင်္ဂဟများစွာ အတွက် မင်္ဂလာနေ့တနေ့ လိုပဲ ပြောစမှတ်ဖြစ်ခဲ့ရတယ် ။ အတုန့် အလှည့် ဆိုတာ ရှိစမြဲမို့ပုထုဇဉ်သားများအနေနဲ့ ဒီလိုပျော်ရွှင်နေခဲ့ကြတာကို မှားတယ် လို့ လည်း မဆိုနိုင်ပါဘူး ။
ကျန်ပါသေးတယ် ၊ လူဆိုးကြီးတယောက် ။ သူ ကတော့ လောလောလတ်လတ် နောက်ဆုံးမှာ လောကကြီးနဲ့ အဆက်ဖြတ်ခံလိုက်ရသူ အာဏာရှင်ကြီးတယောက် ၊ လစ်ဗျားနိုင်ငံရဲ့ အရှင်သခင်ကြီး မူမာကဒါဖီ (Muammar Gaddafi) ပါပဲ ။ အာဏာကို မလွတ်တန်း ဆုပ်ကိုင်ထားခဲ့သူ ၊ ကဒါဖီ တယောက်၊ သူနှိပ်စက်ညှင်းပန်းခဲ့သလို ပြန်ပြီး ဝဋ်လည်တယ် လို့ တောင် ပြောရမလို ၊ သွေးရူးသွေးတန်း အော်ဟစ်ခဲ့ရပြီးနောက် လူရှေ့ သူ ရှေ့ မှာ အသေမလှ ခဲ့ပါဘူး ။
နောက်တဦးကတော့ မြောက်ရူး..(ပြောချင်ဇောနဲ့ မှားသွားတာ ခွင့်လွှတ်ပါ..) ၊ မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ ခေါင်းဆောင်ကြီး ကင်ဂျုံအီ(Kim Jong-il)၊ မကြာသေးခင်ကာလ ဒီဇင်ဘာ ၁၉ ရက်နေ့ မှာ နှလုံးရောဂါနဲ့ ဘဝတပါးသို့ ကူးပြောင်းသွားတဲ့အခါ အနူမြူလက်နက်ဆန့်ကျင်နေကြတဲ့ ကမ္ဘာတဝှမ်းမှ လူအများက တရန်အေးပြန်ပြီပေ့ါလို့ ဝမ်းမြောက်နေကြချိန်မှာ ထူးထူးဆန်းဆန်း ငိုချင်းချနေကြတဲ့ သူ့ တိုင်းသူပြည်သားလူအများကို မြင်လိုက်ရတဲ့အခါတော့ ဝမ်းနည်းရမှာလား ဝမ်းသာရမှာလား ရယ်လို့ ဝေခွဲမရဖြစ်မိပြန်ပါတယ်။
ဒီလို အနိဌာရုံတွေ အပါအဝင် နာမည်ကြီးသူတွေရဲ့ အနိစ္စသဘောတွေကို ပြန်ပြောင်းတွေးတောမိတဲ့အခါမှာတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့သက်ဝင်ယုံကြည်ကြတဲ့ ကံ၊ ကံ၏အကျိုးဆိုတာ ကို ပိုပြီး နားလည် သဘောပေါက်မိသွားတယ် ။ အတိတ်ဘဝက ပြုခဲ့တဲ့ ကုသိုလ် အကုသိုလ် ဆိုတာ ဘယ်လိုမှ ရှောင်လွှဲမရနိုင်တာမို့မိမိကိုယ်တိုင်လည်း လက်ရှိဘဝမှာ ကောင်းသောအမှုကိုသာ ပြုဖို့သတိဝင်မိတယ်။
၈ နှစ်ကျော် ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ အီရတ်စစ်ပွဲကို ဒီဇင်ဘာလ ၁၅ ရက်နေ့ မှာ အမေရိကန်နိုင်ငံမှ အဆုံးသပ်လိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ အတွက် ငြိမ်းချမ်းမှုအလားအလာကောင်းတခု အနေနဲ့ မင်္ဂလာရှိတဲ့ နှစ်တနှစ်တော့ ဖြစ်ပါတယ် ။
ဝေးဝေးလံလံ ကမ္ဘာကြီးနဲ့ချီပြီး စဉ်းစားနေရလောက်အောင် ကိုယ်တိုင်က ဘယ်လောက်များ ကြီးကျယ် ခန်းနားနေတာမို့လည်း လို့အသိဝင်လာတဲ့ အခါ နီးနီးနားနား ကိုယ့်တိုင်းပြည် ကိုယ့်နိုင်ငံ ရဲ့ဒီတနှစ် အဖြစ်အပျက်တွေထဲမှ စိတ် ချမ်းသာ ဘွယ် ကောင်းသတင်းများကိုသာ ဆက်လက်စဉ်းစားလိုက်ပါအုံးမယ် ။ အကောင်းဘက်ကို ဦးတည်ပြီး ပြောင်းလဲလာနေပြီ ဖြစ်တဲ့ အတွက် ကောင်းသတင်း လေပြေ လေညှင်းများကိုသာ ရွေးချယ် စမြုန့်ပြန်ပါ့မယ် ။ ဖေါ်လံဖါးလို့ ဆိုချင်က ဆိုကြပါလေတော့ ....း)။
ဒီတနှစ် အတွင်းမှာ မြန်မာပြည် အတွက် လုပ်ဆောင်နေကြတဲ့ အရာများ အတွင်း ကျေနပ်စရာအကောင်းဆုံးတချက်ကတော့ သန့်ရှင်းတဲ့ အစိုးရလို့ အမည်ပြောင်း ဖေါ်ဆောင်ပေးမဲ့ သမ္မတကြီးရဲ့သက်ညှာစွာ ကိုယ်ချင်းစာနာမှု အဆုံးအဖြတ်များပါ ။
ဦးဆုံးကတော့ မြန်မာပြည်ကြီးနဲ့ တိုင်းသူပြည်သားများရဲ့ မိခင် မြစ်ကြီး ဧရာဝတီ အတွက် ဆုံးဖြတ်ချက် ချပေးမှု ပါပဲ ။သူဟာ၊ နှစ်ပေါင်း ၅၀ နီးပါး ထင်ရာစိုင်းခဲ့တဲ့ အာဏာရှင်အုပ်ချုပ်မှုတွေ အဆက်ဆက် က လျှစ်လျှူရှုခံနေခဲ့ကြရတဲ့ ပြည်သူလူထုတွေရဲ့ အသံ ၊ လိုအပ်ချက်တွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးမဲ့၊ ငြိမ်ဝပ်ပိပြားစွာ ခေါက်ရိုးကျိုး နေခဲ့ကြရတဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ ဘဝကို နားလည်စာနာတတ်လာတဲ့ သမ္မတကြီး၊ နိုင်ငံခေါင်းဆောင်ကောင်း တယောက် အနေနဲ့ ယူဆပြီး လူအများ တဖြေးဖြေး လက်ခံလာနိုင်မဲ့ သမ္မတကြီး တဦးလို့ ပြောချင်ပါတယ် ။ သူ့ ဂတိအတိုင်း တည်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးမယ်လို့ လည်း မယုံတဝက် ယုံတဝက် နဲ့ ယုံကြည်ထားလိုက်မိပါတယ် ။
ဒါ့အပြင် ပြည်ပရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက် အခွန်ငွေလွတ်ကင်းမှုအား ၂၀၁၂ နှစ်သစ် ၊ တစ်ရက်နေ့ မှစပြီး ဖေါ်ဆောင်ပေးတော့မှာမို့ လည်း ဝမ်းမြောက်မိတယ် ဆိုရင် လွန်မယ်မထင်ပါ ။ ဆင်းရဲသားတိုက်ဖျက်ရေးစီမံကိန်းဆိုတာ နှစ် ၅၀ အတွင်း တကြိမ်တခါမှ မကြားဖူးမိလို့ အံ့သြဘွယ်ရာ စီမံကိန်းကြီးအား အောင်မြင်စွာ အကောင်အထည်ဖေါ်နိုင်ဖို့ လည်း မျှော်လင့်တကြီးရှိနေမိတယ် ။ ကမ္ဘာမှာ နောက်တန်းကျ ကျန်နေခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ ကဏ္ဍပေါင်းစုံ ဘက်စုံမှာ တိုးတက် ဖွံ့ ဖြိုးဖို့၊ အထူးသဖြင့် ကျန်းမာရေး ၊ ပညာရေး ၊ စီးပွားရေး အစရှိတဲ့ အခြေခံ လိုအပ်ချက်တွေ ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့စဉ်းစားပေးလာတဲ့ အတွက်လည်း ဝမ်းသာမိရတယ် ။ ရန်ကုန်မြို့ကြီးကို ခေတ်မှီတိုးတက်အောင်၊ စင်ကာပူမြို့ ကြီးလိုဖြစ်အောင်၊ခေတ်မှီ မိုးပျံတံတားကြီးတွေ၊ MRT ရထားတွေ နဲ့ သက်သာလွယ်ကူစွာ ခရီးသွားလို့ ရအောင် ဆောက်လုပ်ပေးဖို့အစီအစဉ်များလည်း ရှိနေပြီဆိုတာ သိရလို့ လည်း ရှေ့ ပြေး အနေနဲ့ ဝမ်းမြောက်မိလိုက်ပါသေးတယ် ။ဘာလို့လည်းဆိုတော့ အရင်ခေတ်စနစ်အခါများမှာ လူကြီးမင်းများဦးနှောက်ထဲတောင် ထဲ့သွင်းမစဉ်းစားပေးခဲ့ကြတာကြောင့်ပါပဲ ။အပြုသဘောကို လားရာတူစွာ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ကြပါစို့ ။ တကယ်လုပ်မယ်ဆို တကယ်အောင်မြင်ဖြစ်မြောက်ရမှာမို့အချိန်လေးပေးပြီး စောင့်ကြည့်ကြပါအုံးစို့ ။ ။စေတနာမှန်ရင် နှစ်ဦင်္းနှစ်ဖက် အကျိုးများစေမှာမဟုတ်ပါလား။
တိုင်းပြည်တပြည် အေးချမ်းသာယာဖို့ အတွက်ဆိုတာ စစ်မက်ဖြစ်ပွားခြင်းများ ကင်းဝေးဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ် ။ကိုယ့်လူမျိုး နိုင်ငံသားအချင်းချင်း နှစ်ပေါင်းများစွာ တိုက်ခိုက်နေကြရတဲ့ စစ်ပွဲများလည်း ငြိမ်းအေးကြဖို့လမ်းစပျိုးလာတာမို့ လည်း ၊အမှန်တကယ် ဖေါ်ဆောင်သက်ဝင်လာဖို့ မျှော်လင့်မိပြန်ပါတယ်။
လာမဲ့ ၂၀၁၂ ဇန္နဝါရီလ ၄ ရက် နေ့ ( လွတ်လပ်ရေးနေ့ ) နဲ့ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁၂ ရက်နေ့( ပြည်ထောင်စုနေ့ ) တွေ မှာ ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းချခံထားကြရသူများကို လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်များပေးမယ် ဆိုတဲ့ သတင်း တခုဟာလည်း မင်္ဂလာရှိတဲ့ နှစ်ကူး လက်ဆောင်တခုလိုပါပဲ ။ (ကြားရတဲ့အတိုင်း အမှန်တကယ် ဖြစ်လာပါစေ) ။
ဒါလေးတွေကတော့ တတ်နိုင်သလောက် မုဒိတာ ပွားမိရတဲ့ အကြောင်းတရားလေးများပေါ့ ။ အကျိုးတရားတွေကတော့ လုပ်ရင်လုပ်သလို ဖြစ်ပေါ်လာမှာပါ ။
မုဒိတာလေးတွေ အမျိုးစုံအောင် ကြံဖန်ပွားလို့ မှ မဆုံးသေး ၊ နှစ်ကုန်ခါနီးလေးမှာ ရက်ဆက်ဆိုသလိုပဲ ဆိုးဝါးကြောက်မက်ဖွယ်ရာ သတင်းများကလည်း တမျိုးပြီးတမျိုး ၊ ဟိုမှာ ပေါက်လိုက် ဒီ မှာ ပေါက်လိုက် နဲ့ မို့၊ည ည အိပ်ရမှာလည်း မဝံ့မရဲ ၊ မဖြစ်မနေ သွားလာရတဲ့ ခရီးလမ်းမှာ အန္တရာယ်မလွယ်နိုင်တဲ့အချိန် အပေါ့အပါးသွားဖို့ ရာလည်း မဝံ့ မရဲ ၊ နေရာတိုင်း အချိန်တိုင်းမှာ စိုးရိမ်သောကစိတ်များနဲ့နေထိုင်နေကြရတဲ့ ဒီလိုအချိန်အခါမျိုး ကင်းလွတ်ဝေးနိုင်ကြပါစေ ။ သောကကင်းဝေးစွာ အိပ်စက်နားနေနိုင်ကြပြီး နိုးလာတဲ့ အချိန်မှာလည်း သောကကင်းစွာ လုပ်ကိုင်နေထိုင်ကြရခြင်းဆိုတာလည်း ဒီမိုကရေစီရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ အနှစ်သာရတခု ဖြစ်ကြောင်း မြွက်ကြားခဲ့တဲ့ အမေစုရဲ့ စကားကို ပြန်ပြီး ကြားယောင်မိလိုက်ပါတယ် ။
အကောင်း အဆိုးတွေ ရောပြွန်းနေတဲ့ ဒီ ၂၀၁၁ ခုနှစ်ဟာ မကြာခင်အချိန်အတွင်းမှာ ကုန်ဆုံးတော့မှာဖြစ်ပြီး နှစ်သစ် ကို ကူးပြောင်းတော့မှာပါ ။ လာမဲ့ နှစ်သစ် ၂၀၁၂ မှာ တော့ အမိမြန်မာပြည်ကြီးအတွက်ရော ၊ ကမ္ဘာကြီင်္း အတွက် ပါ အကောင်းများ ပိုမို ၊ အဆိုးများ လျော့နည်း စေမဲ့ နှစ်သင်္စတခု ဖြစ်ရပါစေကြောင်း ဆုမွန်တောင်းလိုက်ပါတယ် ။သဘာဝဘေးအန္တရာယ်အမျိုးမျိုး ၊ စစ်မက် ဘေးဒါဏ် အမျိုးမျိုး၊ လူအချင်းချင်း နှိပ်စက် သတ်ဖြတ် လိမ်ညာ လှည့်စား အနိုင်ကျင့်မှု အမျိုးမျိုးတို့ မှ လွတ်ကင်းကြပါစေ ။ လူသားအားလုံး သောက ကင်းစွာ အိပ်ကောင်းခြင်း၊ နိုးကောင်းခြင်း များနဲ့ ကိုယ် စိတ် နှစ်ဖြာ ကျန်းမာချမ်းသာနေနိုင်ကြပါစေ ။
ပုံများကို ဂူဂဲလ်မှ ရှာဖွေ ရယူထားပါတယ် ...
:kiki : at 12/31/2011 11:59:00 AM
...အလင်းစက်များ said... | Saturday, December 31, 2011 1:44:00 PM
အမှန်ပါပဲ အစ်မကိခင်ဗျာ။ မည်မျှ ပင် လက်မခံချင်သော်လည်း လက်ခံထားပါတယ်။ နှစ်ပေါင်းများစွာ မဲမှောင်ခဲ့တဲ့ တိုင်းပြည်မို့ဟက်ချလောင်းလို့မျက်လှည့်ပြလို့မရနိုင်တာတော့ စိတ်ရှည်သည်းခံ ကြဖို့လိုမယ် ထင်ပါတယ်။ မကိပြောသလိုပဲ ဖော်လံဖားများ ဖြစ်သွားလေ မလားပေါ့။ :D
Happy New Year ပါ မမကိခင်ဗျား။
ခြင် said... | Saturday, December 31, 2011 3:15:00 PM
Happy New Year ပါ ချစ်သူငယ်ချင်း ကိကိရေ
rose of sharon said... | Saturday, December 31, 2011 3:56:00 PM
ဗဟုသုတအပြည့်နဲ့ မှတ်သားစရာကောင်းတဲ့ပို့စ်လေးဘဲသူငယ်ချင်းရေ... နောင်နှစ်အတွက် အကောင်းဆုံးတွေကို မျှော်လင့်ရင်းနှစ်သစ်ကိုကြိုဆိုကြမယ်နော်... Happy New Year!
ခရစ္စတလ် said... | Sunday, January 01, 2012 10:34:00 AM
“သုခအပေါင်းနဲ့ ပြည့်စုံသော မင်္ဂလာနှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေ”
မငုံ said... | Sunday, January 01, 2012 2:06:00 PM
နှစ်သစ်မှာ မင်္ဂလာသတင်းချည်းသာ ဖြစ်ပါစေ.. Happy New Year မကြီးရေ
မြသွေးနီ said... | Tuesday, January 03, 2012 6:46:00 PM
ပျော်ရွှင်ဖွယ် နှစ်သစ်များစွာကို စိတ်ကျန်းမာ ကိုယ်ချမ်းသာစွာ ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေ...။
Anonymous said... | Tuesday, May 21, 2013 7:16:00 PM
The 8GB version is only being sold through Google's own store, rather than physical retailers - but online buyers appear to have shunned it, surprising Google, which had thought that the cheaper version, despite having only half as much storage, would sell better than it has. 1 tablet cannot handle DVD discs directly without DVD drive. 65 inches Super AMOLED capacitive touchscreen run by 16 million colors.
Havealook at my page: nexus 7
Anonymous said... | Tuesday, May 21, 2013 9:03:00 PM
allows CCTV monitor to display video from alarm channel without leaving the viewing mode of the
current image.5hour battery life you aren't going to find anything that lasts longer on one charge and is still able to offerafull range of applications and net connectivity. Many years in the past the user had to write their programming code manually, using some cryptic codes.
Takealook at my web-site - samsung chromebook
Anonymous said... | Wednesday, May 22, 2013 7:57:00 AM
On the other hand when you addavertical grip
andasecond battery to selected camera design the cameras all ofasudden complete speedier.
Here is my web page; canon 6d review
Anonymous said... | Wednesday, October 02, 2013 9:54:00 PM